नेपाली सिनेमाका उदाउँदा दुई नायकको टक्कर - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपाली सिनेमाका उदाउँदा दुई नायकको टक्कर
अघोषित रुपमा यसरी भिड्दैछन् अनमोल र प्रदीप
प्रभात लामा काठमाडौँ २८ असोज
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र उद्योगमा अभिनेता अनमोल केसी र प्रदीप खड्का सर्वाधिक ‘डिमाण्डेड’ र ‘पपुलर’ कलाकारका रुपमा स्थापित भइरहेका छन्। छोटो समयमै राम्रो चर्चा बटुल्न सफल यी नायकका लागि निर्माता–निर्देशकहरु आँखा चिम्लेर पैसा खन्याउन तयार छन्।
चलचित्र ‘होस्टेल’बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेका अनमोल र ‘प्रेमगीत’बाट उदाएका प्रदीप यतिबेला एक अर्काका अघोषित प्रतिस्पर्धी बन्न पुगेका छन्। यी दुवै अभिनेतालाई अहिले निर्माता निर्देशकहरु एक अर्काको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीका छोरा अनमोलले पारिवारिक साथ र सहयोग दुवै पाइरहेका छन् भने यता प्रदीप यो क्षेत्रमा एक्लै संघर्षरत छन्। यी दुवै अभिनेता अहिले दर्शकका सर्वाधिक प्रिय कलाकार हुन्। यी दुईका आआफ्नै फ्यानहरु रहेका छन्।
सार्वजकि कार्यक्रमहरुमा भेट हुँदा खुलेरै अंकमाल गर्ने र आफूहरुमा कुनै प्रतिस्पर्धा नभएको बताए पनि दुवैले एक अर्काबाट खतरा महसुस गरिरहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ। भूवनको विरासतबाट उठेका भए पनि अनमोलको यतिबेला नेपाली सिनेमा उद्योगमा आफ्नै परिचय र पहिचान बनिसकेको छ। भूवनलाई नरुचाउने नेपाली सिनेमाको एक समूह भने प्रदीपलाई प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। प्रदीपले आफ्नै बुताले यो क्षेत्रमा पहिचान र परिचय स्थापित गरेका छन्।
पछिल्लो समय अनमोलको सिनेमा ‘ए मेरो हजुर ३’ को फस्र्टलुक सार्वजनिक भएको केही घण्टा मै प्रदीपको ‘लव स्टेसन’को पोस्टर सार्वजनिक भयो। अघिल्लो दिनसम्म केही हल्लाखल्ला नभएको लवस्टेसनले अनमोललाई नै लक्षित गरेर पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो। अझ रमाइलो कुरा के छ भने ए मेरो हजुर ३ मा अनमोल गिटार बोेकेको देखाइएको छ भने प्रदीप पनि हातमा गिटार बोकेर पोस्टमा देखिएका छन्। यसले पनि यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धालाई झल्काएको छ। त्यसो त ए मेरो हजुर ३ प्रदर्शन कै दिन लवस्टेशन पनि प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
सुरुदेखि नै प्रतिस्पर्धी
अनमोल र प्रदीपको प्रतिस्पर्धा ए मेरो हजुर २ र लब स्टेशनबाट सुरु भएको भने होइन्। यी दुईबीच सुरुवाती चरणबाटै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। संख्याका हिसाबले अहिलेसम्म दुवै अभिनेताका पाँच÷पाँच वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन्। अनमोलका ‘होस्टेल’, ‘जेरी’, ‘ड्रिम्स’, ‘गाँजालु’, ‘कृ’ र प्रदीपका ‘स्केप’, ‘प्रेमगीत’, ‘प्रेमगीत २’, ‘लिलिबिली’, ‘रोज’ प्रदर्शनमा आएका छन्। जसमध्येमा अनमोलको कृ व्यवसायिक रुपमा असफल भए भने प्रदीपको स्केप र रोज व्यवसायिक रुपमा असफल भएका छन्।
लव स्टेशन लगत्तै प्रदीप ‘भैरवी’मा व्यस्त हुनेछन् भने अनमोल ए मेरो हजुर ३ को छायांकन लगत्तै ‘ब्याचलर बन्टी’मा व्यस्त हुनेछन्। यस वर्ष प्रदीपका सिनेमा रोज र लवस्टेशन गरी दुई र अनमोलको क्याप्टेन र ए मेरो हजुर ३ गरी २ वटा सिनेमा प्रदर्शनमा आउने छन्।
पारिश्रमिकको लडाईँ पनि उस्तै
यी दुई अभिनेताबीच पारिश्रमिकका विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ। सिनेमा ‘कृ’ का लागि अनमोल केसी २० लाख रुपैयाँ लिएर सर्वाधिक महँगा अभिनेता बने। त्यही समयमा प्रदीपले लिलिबिलीका लागि २१ लाख रुपैयाँ र ओभरसिज राइटस् लिएर सर्वाधिक महंगा कलाकार बने।
यस लगत्तै अनमोलले एक हिन्दी सिनेमाको लागि ५० लाख रुपैयाँ लिएको खबर बाहिरिएको छ भने ए मेरो हजुर ३ मा पनि महँगो पारिश्रमिक लिएको चर्चा छ। यता प्रदीप भने निश्चित पारिश्रमिकसहित सिनेमाको शेयर हिस्सामा बस्ने तयारीमा छन्। यसले के देखाउँछ भने यी दुईबीच पारिश्रमिक कस्ले धेरै लिने भन्ने विषयमा पनि नजानिँदो तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।
दुवै कपाडाको ब्राण्ड एम्बेस्डर
अभिनेता खड्का ‘नोभेम्बर’ नामक कपडाको ब्राण्ड एम्बेस्डर बनेको केही महिनापछि अनमोल पनि ‘क्याप्सु’ नामको कपडाको ब्राण्ड एम्बेस्डर बनेका छन्। एक वर्षको सम्झौतामा अनमोल नेपालका लागि क्याप्सुको एम्बेस्डर बनेका हुन्। श्रोतका अनुसार अनमोलले १५ लाख बढी पारिश्रमिक लिएका छन्।
यसरी नायक प्रदीप नोभेम्बरको ब्राण्ड एम्बेस्डर भए लगत्तै अनमोलले पनि ब्राण्ड एम्बेस्डर बन्न खोज्नुलाई यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धा नै मुख्य कारक भएको सिने क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
अन्य कुरामा पनि उस्तै पारा
पारिश्रमिक, सिनेमाको संख्या, ब्राण्ड एम्बेस्डरमा मात्रै नभएर यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा अन्य कुरामा पनि देखिन्छ। दुबै कलाकारले खेल्ने सिनेमा र लिने अन्तर पनि उस्तै देखिन्छ। दुबै जनाले वर्षमा एउटा मात्रै सिनेमा खेल्ने बताए पनि पछिल्लो समय आएर त्यसमा दुबैले ब्रेक गरेका छन्। यो वार्ष दुबैका दुई/दुई चलचित्र प्रदर्शनमा आउने भएका छन्। भने अहिले साइन गरेका फिल्मको संख्या हेर्दा अर्को वर्ष दुवैले खेल्ने फिल्मको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ।
ए मेरो हजुर ३ छायांकनमा व्यस्त रहेका अनमोल त्यसपसिछ ब्याचलर बन्टीमा व्यस्त हुनेछन् भने त्यसपछि अर्को एक हिन्दी सिनेमामा उनी जुट्नेछन्। यता सिनेमा लव स्टेशनमा व्यस्त प्रदीप त्यसलगत्तै सिनेमा भैरवी, त्यसपछि ‘दिपेन्द्र सरकार’मा व्यस्त हुनेछन्। सख्याको हिसाबले पनि उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।
एकै समयमा चकलेटी हिरो दुईका उत्तिकै लोकप्रियता, उत्तिकै व्यस्तता र उत्तिकै मागका कारण उनीहरुबीच बढेको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनोस्।
प्रकाशित २८ असोज २०७५, आइतबार | 2018-10-14 13:42:06
प्रभात लामाबाट थप
अनमोल ‘मेगा स्टार’ नै हुन त?
सिनेमा ‘फ्लप’ भएपछि छोरो पाएँः अभिनेत्री आशिका तामाङ (खसीखसीनी काण्ड)
‘भद्रगोल’की रक्षा भन्छिन्ः म त दुई बच्चाकी आमा!
सुटिङ रिपोर्टः ‘कस्ती काली स्वस्तिमा !’
बलात्कारी र एसिड आक्रमणकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छः प्रियङ्का
अप्ठ्यारोमा अनमोल !
अनमोलको दौडधूप चलिरहेका बेला झरनालाई शुभ मुहूर्तको किन यति हतारो?
नाँचघरमा गाईजात्राको रौनक (फोटोफिचर )
‘नेपाल आइडल’ मा धेरैलाई चकित पार्ने को हुन् ‘काउली बुढी’